चिनियाँ सैन्य र साइबर खतरामा शक्तिशाली मुलुक, दोस्रो विश्‍वयुद्धको झल्को ! - No 1 News Portal Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय चिनियाँ सैन्य र साइबर खतरामा शक्तिशाली मुलुक, दोस्रो विश्‍वयुद्धको झल्को !
चिनियाँ सैन्य र साइबर खतरामा शक्तिशाली मुलुक, दोस्रो विश्‍वयुद्धको झल्को !
एजेन्सी : चीन पछिल्लो समय हिंस्रक गतिमा अगाडि बढेको छ – हङकङ, सिन्जियाङमा मानवअधिकारको दमन गर्नेसँगै सैन्य र आर्थिक शक्तिको प्रयोग गरेर छिमेकी मुलुकहरुको भूभाग अतिक्रमण गर्ने गरिएको छ ।
कोभिड-१९ को विषयमा विकसित मुलुकहरुले स्वतन्त्र अनुसन्धानको मागप्रति बेइजिङले गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउने धम्की दिएको छ । चीनले साइबर युद्धको अर्को खतरापूर्ण स्थितिमा संसारलाई त्रसित बनाएको छ । यी सबैले विश्वव्यापी शक्ति राष्ट्रहरुलाई एक ठाउँमा आएर गठबन्धनको रूपमा प्रस्तुत हुन चीनले बाध्य पारेको छ । चीनको अर्को नाजी जर्मनी बन्‍ने खतरा भएकोले त्यसलाई रोक्‍न गठबन्धन हुन लागेको बताइएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डले ‘पाँच आँखा’ को साझेदारी समूह सुरु भयो । अमेरिकाको अपवाद बाहेक अरु चारै देशले अहिलेसम्म चीनसँग बलियो द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम राखेका छन् । यद्यपि, अहिले सबैले हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक पारित गरेपछि बेइजिङप्रति आफ्नो अडान स्पष्ट पारिदिएका छन् ।
बेलायत र अष्ट्रेलियाले हङकङबाट भागेका व्यक्तिलाई सुरक्षित बसोबास उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छन् । क्यानडा र न्यूजील्याण्डले हङकङसँगको प्रत्यर्पण सन्धि स्थगित गरेको छ ।
चीन र यी देशहरूबीचको बिग्रँदो सम्बन्धले अमेरिकी एजेन्सीहरूको कम्पनीलाई जासुस सम्बन्धी खतरा पेश गरेको आरोप लगाउँदै पृष्ठभूमिमा हुवावेको वरिपरि रहेको सुरक्षा बहसलाई पनि तीब्र पारिएको छ । ‘पाँच आँखा’ले संगठित रुपमा चीनको आर्थिक वृद्धिको मुख्य स्रोत भनिएको दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेले निर्मित ५जी उपकरणको प्रयोगलाई प्रतिबन्धित गरिरहेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले हुवावेलाई अमेरिकी टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर निर्मित चिपको विदेशी कम्पनीको बिक्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयपछि फ्रान्सले पनि हुवावेको सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्तो अवस्थामा, हुवावे अविश्वसनीय प्रविधिको प्रयोग गर्न बाध्य भएको र सुरक्षा जोखिम नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको बताइएको छ ।
जसले गर्दा हुवावेलाई बेइजिङले वास्विकरुपमै जासूसीका लागि प्रयोग गर्ने र विनाशकारी नतिजाहरूको साथ सञ्‍चारमा अवरोध पुर्‍याउने सम्भावना पनि बढेको छ । पीपुल्स लिबरेशन आर्मीका पूर्व अधिकारी रेन चेङफेइको स्वामित्व रहेको हुवावेबाट अमेरिका रेनको सैन्य पृष्ठभूमि बारे चिन्तित छ । साइबर जासूसीमा बेइजिङको भूमिबारे अमेरिका अज्ञात छैन ।
२०१२ मा हुवावेले युके डिफेन्स फर्म बीएई प्रणालीहरुलाई ह्याक गरी संयुक्त स्ट्राइक फाइटर (जेएसएफ) जेटको डेटा र २६४ अर्ब चोरी गरेका थियो । चीनले कम्प्युटर नेटवर्कको शोषणले सरकारी संस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई गम्भीर र लगातार आर्थिक खतराको रूपमा खडा गरेको छ ।
साइबर सुरक्षा विज्ञ जो रोबिन्सनका अनुसार, सन् २००८-२००९ को अवधिमा करिब ३० प्रतिशत अर्थात ५०० साइबर आक्रमहरु चीनबाट नै भएका थिए । २० भन्दा बढी देशहरू चीन प्रायोजित ह्याकरहरु परिचालित थिए ।
बेलायतले अब १० देशहरूको एलिट क्लब प्रस्ताव गरेको छ । जसलाई ‘डी१०’ भनिनेछ । जसमा जी प्लस भारत, जापान र दक्षिण कोरियाको ५जी प्रविधिको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन र चीनमा निर्भरता कम गर्न काम गर्नेछन् । यद्यपि यो कदम प्रतीकात्मक बढी देखिन्छ, यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बढी हुनेछ ।
कोभिड-१९ को संक्रमणबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी लुकाएको भन्दै चीनको कडा आलोचना भएको छ र यसले लगभग सबै देशहरूमा अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट निम्त्याएको छ । यस्तो अवस्थामा गठन हुन लागेको डी१० क्लबले साम्राज्यवादी र हिजोनिक चीनकोविरूद्ध सामूहिक लडाईमा सामेल हुने गति प्रदान गर्नेतर्फ लक्षित भएको देखिन्छ ।
हुवावेमाथिको प्रतिबन्ध को एक अपेक्षित असर हो । चिनियाँ कूटनीतिज्ञ मात्र होइन, चीनको राज्य-नियन्त्रित न्यूज मिडिया पनि यस निर्णयविरूद्ध सामेल भएको छ । बेलायतका लागि चीनका दूत लियू सियामिंगले उक्त निर्णयलाई ‘निराशाजनक र गलत’ भने तर कम्युनिष्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको ग्लोबल टाइम्सले पीडादायी बदला लिने चेतावनी दिएको छ ।
अब विश्वको राजनीतिमा चीन नयाँ शत्रु बन्‍नेतर्फ गइरहेको छ। ताइवान, जापान, भियतनामले चीनको घुसपैठविरुद्ध हवाई र नौसेनामार्तफ काउन्टर सुरु गरेका छन् । जापानले बेइजिङले लामो समयदेखि आँखा लगाइरहेको टापुको श्रृंखलालाई एकीकृत गर्न कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसले दोस्रो विश्वयुद्धको झलक दिन्छ, त्यस समय पनि यसरी नै विश्वको बहुमत राष्ट्रहरु मानवतलाई नै संकटमा पार्ने हिटलरलाई हराउन भेला भएको थिए ।
Previous articleधारा ३७० खारेपछि : फलफूल उत्पादकको जीवनस्तरमा आएको समृद्धि
Next articleचीनको ‘विन विन’ मोडल, भारतलाई धम्क्याउने होइन, विश्‍वासमा लिनुपर्छ